Global Voices teny Malagasy » Voan’ny Nataony Ihany Ilay Peroviana Mpihira Nitsikera ny ‘Free Riders’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Septambra 2013 3:21 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Orbe Nandika (en) i Gabriela García Calderón, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Amerika Latina, Però, Mediam-bahoaka, Mozika
Dikasary avy amin'ny lahatsarin-kira  “Se la llevan fácil” nalefan'i Julio Andrade tao amin'ny YouTube.
Andro vitsivitsy lasa izay no nampalaza ilay peroviana mpihira sady mpamoron-kira , i Julio Andrade  [es] teo anivon'ireo mpiserasera amin'ny aterineto noho ilay hirany vaovao hoe “Se la llevan fácil” (adika tsotsotra hoe : ” Azon-dry zareo moramora iny “), izay itsikerany mivantana ireo olona lasa malaza ary indraindray manan-karena nefa tsy nila niezaka ary tsy dia manan-talenta. Midika hoe : ” moramora no ahazahoan'izy ireo vola, laza na fankatoavana” ny “Se la llevan fácil”.
Nanana hira betsaka izay nanjary tian'ny olona tamin'ny taona 90 i Andrade . Izy no filoha lefitra faharoan'ny Fikambanan'ny Peroviana Mpamorona sy Mpanoratra tononkira fantatra amin'ny hoe : APDAYC  [es] anarany amin'ny teny Espaniola, sampan-draharaha mpiaro ny asan'ireo Peroviana mpanoratra sy mpamoronkira.
Zarain'ny tranonkala Comunidaria  [es] ao amin'ny lahatsoratr'i Cholodecono  [es] ny tantara niandohan'ilay hira :
Mandritra izany dia manontany tena ny bilaogy El lado B de Manzarock  [es] hoe : ” Iza no hanilika an'i Julio Andrade ? ” [es]:
Esoin'ireo mpiserasera amin'ny Twitter amin'ny alàlan'ny tenifototra hoe #YSeLaLlevanFacil  ilay hira ary ohariny amin'ny zava-misy amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, toy ny lalao baolina kitra hita na aiza na aiza :
Lalaovina ny “We are the champions” (isika no tompon-daka) raha mandresy ny ekipam-pirenena Peroviana amin'ny baolina kitra, fa raha resy kosa izy ireo dia ny #SeLaLlevanFácil  no hiraina satria tsy mandeha irery ny fahoriana.
Misy fomba vaovao fampijaliana vao hita. Lavin'ireo mpikatroka mafàna fo izany satria mampahory loatra. #selallevanfacil  pic.twitter.com/rdr5J8Zhk4 
Ren'i Thelma sy Louise koa i Julio Andrade #JulioAndrade  #Selallevanfácil  pic.twitter.com/HevXJEHJBD 
Nanapa-kevitra ny hamono tena ilay frera (relijiozy) mialoha ny hihainoana ny #SeLaLlevanFacil -n'i Julio Andrade, naleony nifandona tamin'ny vato.
Julio Andrade: “noforonina mba ho doka hieli-patrana ny “‘#Selallevanfácil ‘ ” http://t.co/qv6ylkduzG 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/09/22/51704/
 lahatsarin-kira : https://www.youtube.com/watch?v=olBACnZJEao
 Julio Andrade : https://www.youtube.com/channel/UCXzMVuuAsDo8Ke2In3Y2GvQ?feature=watch
 Iza no hanilika an'i : http://manzarockbsides.wordpress.com/2013/09/02/quien-se-lleva-a-julio-andrade/